MUUQAAL: R/Wasaare Khayre oo Soo dhowayn Balaadhan Sucuudiga kala Kulmay iyo Kulamada Madaxda oo Bilowday | KALSHAALE
MUUQAAL: R/Wasaare Khayre oo Soo dhowayn Balaadhan Sucuudiga kala Kulmay iyo Kulamada Madaxda oo Bilowday
Oct 9, 2018 - 1 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Riyaadh ee dalka Boqortooyada Sucuudiga, kadib casuumaad rasmi ah oo uu ka helay.
Jaale ra’iisalwasaare adiga iyo madaxweeyne Farmaajaba joojiya safaradaan daanyeernimada ah, ee bishiiba meel diyaarad loo raacaya.
Waa caqli daanyeernimo, in layiraahdo waa nala casumay iyo blah blah. Waxaanba u maleeyn sababta loo raadsado in laga noqda madaxweeyne iyo ra’iisalwasaare dalkaan baaba’ay ee Somaliya in safarro bilaash lagalo iyo sawirro la’isku soo wadamo kale, oo uusan qofka lacagtiisa baxsaneeynin, laakiin, waxeey caqlilaawayaasha Somalida hilmaansanyahiin, ma u qalantaa safar xun, oo 10 kun oo dollar camal ah oo lagu siiyo, in aad ku tumato aayaha, iyo jirritaanka iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka Somaliya?
Ra’iisalwasaare Kheeyre, joojiya siyaasada “rooky” nimadda ah, ee taleefoon inta dirtaan, amaba la’idiin soo dirro, aad u carareeysaan wadamo kale. Sacuudigaan mother fuckers ah, ma’is weeydiiseen sida eey iyaga iyo Imaaraadka u wiiqayaan madaxbanaanida iyo qarranimada dalka Somaliya? Daanyeer. Sidaas oo eey tahay madaxda Somaliyeed kuma dhacaan in eey dhahaan “fuck you” imaaraadka iyo sacuudiga, oo eey ka raacdeeyaan wadanka. Sabab, sababtoo ah, waa daciif madaxda Somaliyeed ee hadeer. Madaxdii iyaga ka horeeyayna sidoo kale waxeey ahaayeen daciiif, waliba iyaga ayaa u sabab ahaa in khaniisiinta Imaaraadka wadanka ku xoogeeystaan, oo waxeey rabaan ka sameeyaan, oo qabiilada Somaliyeed la macaamilaan, oo eey isku diraan qabiilada Somaliyeed. Inta goori goor tahay waa in laga raacdeeyaa Imaaraadka wadanka Somaliya, sacuudigaan aabahiis wasaha ahna layareeysaa xariirka aan laleenahay.
Daanyeero Somali ma fahmi karaan, carabka xunka ah waa kan aduunka noogu neceb. Waa kuwa hor istaagan in Somaliya iyo wadamada islaamka iska dhaaf barwaaqo iyo saliid in eey lasoo baxaane, nolosha xataa uma ogola shacabka Somaliyeed. Markaasaa laleeyahay casumaaad ayaa laga helay. Waa fucking tuusasho iyo magan allow magan rasuul.
Daanyeero khashin ah oo raqiis ah waaye madaxda Somaliyeed.